QEYBTA 1: Ee Sheekadii Xusuustii XAYAAT | Warar Sugan iyo Ciyaaraha Caalamka	Home
Waxaa la daabacay: Friday, January 25, 2013 - 11:17:17 Waxaa la aqristay: 654 Jeer.
QEYBTA 1: Ee Sheekadii Xusuustii XAYAAT
Sheeko taxane ah.
Bartamihii Sannadkii 2003-tii ayey ahayd. Madashuna waa Magaalladda Muqdisho oo xilligaasi ay ka jireen dagaallo iyo dhac hubeysan.
Xilligaasi Qof kasta oo Reer Muqdisho wey saamaysay amni-darrdda, waxaana iska caadi noqotay in la arko dhacdooyin laga argagaxo oo isugu jira dhoisbaarooyin dilal, dhac, kufsi, jirdil iyo kuwo ka sii naxdin badan.
Gaari Bas ah oo rakaab waday kana yimid Xaafadda Suuqa Xoolaha, ayaa waxaa mar qura si kedis ah lagu joojiyey bar isbaaro oo kooxo hubeysan dhigteen meel ku dhow Wershaddii Baastadda.
Rakaabkii naxdin baa la soo kodoshay, oo qof kasta sidii baraf meel bcad la dhigay oo kale ayuu u shiilmay.
Wiil yar oo da’da 16-aadka ayaa albaabka gaariga soo istaagay, kadibna intuu qorigiisa AK47 oo u garaarsanaa u furtay ammanka, ayuu farta saaray keebka. Si jeesjees ah ayuu Rakaabkii ugu yiri:- ‘Qof kasta ha soo dego’.
Guux cabsiyadeed iyo inuu qof kasta Towxiidka iyo Wardiga afka ku qabsado ayey Rakaabkii bilaabeen, iyadoo uu Kirishboygiina la doodayo Dableydii kale ee Isbaaradda u taallay.
Rakaabkii waxaa laga wada xuubsaday Telefoonaddii, Lacagihii, Dahabkii, Saacadihii iyo wax kasta oo nacfi-gal ah oo ay wateen, kadibna Rakaabkii iyagoo anfriirsan ayaa lagu amray inay dib u raacaan Baskii laga soo dejiyey.
Hooyo Waayeel oo ay dableydii ka qaateen kharaj yar oo ay faraqa diraceeda ugu jiray, ayaa ku calaacashay:- ‘Waan idin baryayaa ii dhaaf lacagta, waxaan ku korsadaa ciyaal agoon ah’. Laakiin looma jixinjixin oo waxaa lagu yiri:- ‘Duqda claclka nagala tag, Annagaba Isbaaradda waxaan u dhiganay si aan ugu biilno ciyaalka ay ka dhinteen Saaxiibadeenna halkan joogi jirtey’.
Baskii markii uu in cabaar ah socday, ayaa waxa bilaabantay dood iyo inay Darewlka iyo Kirishboyga ku eedeeyaan inay wax ka ogaayeen Isbaaradda. Laakiinse, Dareewalkii ayaa ku qanciyey in Kirishboyga laga fara maroojiyey lacagihii ay ilaa iyo saakayto shaqeynayeen.
Wiil dhallinyarro ah oo wax ka fadhiyey Kuraasta dambe ee Baska ayaa waxa uu hoostiisa ka helay Telefoon-gacmeed oo malaha qof rakaabka ka mid ah ka dhacay intii aysan Maleeshiyadda ku amrin Rakaabka inay ka soo wada deggaan Baska.
Waxa uu cod la maqli karo ku yiri:- ‘Alaab baadi ah ayaan halkan ka helay, yey ka maqan yihiin?’. Qof kasta oo rakaabka ka mid ah ayaa hadalkaasi dareen geliyey, wuxuuna qof kasta bilaabay inuu dib jeebabkiisa u baaro.
Ninkii Dhallinyarradda ahaa waxa uu waayey qof sheegta Alaabta baadida uu hayo, wuxuuna markii dambe yiri:- ‘Yuu Mobaylka ka maqan yahay?’.
Gabar fadhiday Kurs u dhow, ayaa la soo booday:- ‘Walaal, anigaa iska leh Mobaylkaasi’. Wuxuu u sii raaciyey sheeg noociisa iyo Lambarka SIM Cardka kuugu jiro?’.
Gabadhii oo malaha baqdin iyo xishood ka qaaday rakaabka oo iyada soo wada eegay, ayaa waxay la soo baxday warqad, kuna qortay Nooca Mobaylkeeda iyo Lambarka Telkeeda, kadibna waxay u dhiibtay wiilkii hayey Mobaylkii baadida ahaa.
Intuu warqaddii akhriyey,ayuu garwaaqsatay inay gabadha tahay qofka leh Mobaylka, oo ay run sheegayso, wuxuuna isagoo madaxa ruxayo la soo baxay Mobayl uu watay, kadibna waxa uu garaacay Lambarka warqadda ku qornaa.
Wuxuuna ku yiri:- ‘Iga raalli noqo Lambarkaaga tijaabinayaa, waxana Ilbiriqsiyo kadib, sharqamay Telkii baadida ahaa.
Gabadhii waxay maqashay shanqarta muusikadda Telkeeda, kadibna waxay dib u milicsatay wiilkii hayey Telkii. Intuu u dhoola-caddeeyey, ayuu ku yiri:- ‘Abaayo, Hoo Mobaylkaaga, waxaan hubinayey inuu kaaga yahay iyo in kale.
Wiilkii dhallinyarradda ahaa waxa uu dib u akhriyey nidaamka ay Warqaddii u qornayd, wuxuuna la dhacay Erayadaha Asluubaysan ee ay ku soo qortay, waxaana naftiisa galay damac iyo inuu isweydiiyo haddii uu fursad kale u helayo inuu gabadhaasi la sii hadlo.
Kirishboygii Baska ayaa bilaabay inuu Rakaabkii ka ururiyo Lacagihii nooliga ahaa, laakiinse waxay badankooda haayeen kuwo xitaa aan haysanin kharajkii yaraa ee lagu raacayey Basaska ka shaqeeya Suuqa Xoolaha ilaa Bakaaraha.
Guux iyo dood baa dhex martay Kirishboyga iyo rkaabka aan lacagta haysanin, laakiinse, Gabadhii Mobaylka ka lumay heshay ayaa ku tiri:- ‘Kirishboy, ha ku qeylinin dadka, waa og tahay in Maleeshiyo na soo baaratay, ee xisaabo lacagaha tayda, tan wiilkaasi iyo afarta rakaab ee aad kula dagaalamayso lacagaha baska’.
WQ. Ustaad Nuradin Hagi Abokor Ahmed ‘Diini-Yare’
= LA SOCO QEYBTA 2-LABAAD JIMCAHA DAMBE.=